FILOHAN’NY ANTENIMIERANDOHOLONA RIVO RAKOTOVAO : Miezaka manototra ny ratsy ataon’ny antoko Hvm
Na efa hita mibaribary izao aza ny tsy fahaiza-mitantana nataon’ ny antoko Hvm notarihin’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra izay fotoana niasany izay dia vao mainka tsy misy henatra intsony ireo mpisolelaka manodidina azy toa an’i Rivo Rakotovao filohan’ny antenimierandoholona no sady Filohan’ ny antoko Hvm, manototra ny ratsy atao sy mbola te hanamarin-tena hatrany. 20 juin 2018
Voaporofo tamin’ny valan-dresaka nataony afak’omaly tolakandro teny amin’ny foibe misy azy ireo eny Antanimena ny filazany fa “ny hampilamina ny firenena sy ny hirosoana amin’ny fifidianana izao no maha maika. Nodradradradrainy ihany koa fa nisy fifanarahana ara-politika mazava tsara nataon’ireo vondrona maro samihafa toy ny Mapar, Tim ,ny Mmm… rehefa natsangana io governemanta vaovao io ka tsy tokony hilàna vaniny intsony”.
Iaraha-mahita anefa tamin’ity governemanta vaovao ity ny mbola maha maro an’isa ireo mpikambana ao amin’ny Hvm hatrany, izay mahatezitra ireo mpitolona amin’izao fotoana. Raha ny hampandry adrisa ny vahoaka koa ny tiany ahatongavana dia diso hevitra tanteraka satria efa lanin’ireo liam-baovao tsianjery ny paikady ratsy efa nahazatra ny kravaty manga. Milaza moa itsy farany fa vonona hanohana ny solontenan’ny antoko Hvm mandritry ny fifidianana tahaka ny rehetra ihany ka tsy mametraka olana ny amin’ny hafa.
Ny mahagaga dia toa ity rangahy ity no miseho mametraka ny tenany fa matanjaka ary tsy hisy hahatohitra ny antoko misy azy. Betsaka ny miandry ny valim-pifidianana ary tsy hanaiky kosa raha toa tsy mazava sy mangarahara sy madio ny lalao.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (2477) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (912) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (213) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (114) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (110) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (97) 2 mars 2021